Yini i-odometer futhi yenzelwe ini? Isimo Sezulu Senethiwekhi
Njengamanje umshini usetshenziselwa ukukala ibanga elihanjiwe yinto ehambayo futhi selikhuphukile ezimotweni njenge-odometer. Lezi zinsizakusebenza zibizwa i-odometer. Kuyaziwa futhi ngegama lomhloli kanye ne-odometer. Ukubheka amakhilomitha ezimoto nokukwazi ukukala amabanga kwakuvame ukusetshenziswa kwezolimo, i-ergometry, ukuphepha emgwaqeni nakwezinye izicelo zezimboni.
Kulesi sihloko sizokutshela ngazo zonke izici nokusebenza kwe-odometer.
2 I-odometer yemishini
3 I-odometer yedijithali
4 Amathiphu wokungakhwabanisi
Le divayisi yokulinganisa ibanga iqala kusukela ekwakhiweni nasekusebenzeni okuhlukile kuye ngohlobo. Noma ngabe i-analog noma idivayisi edijithali, kufanele sazi ukuthi iziphi izinto ezenza ukuthi le divayisi isebenze.
Ake sibone ukuthi yiziphi izingxenye ze-odometer:
Intambo yamasondo: Lezi yizintambo umsebenzi wazo ukukwazi ukuxhumana phakathi kwamagiya esondo nemitha. Ngaphandle kwalolu shintsho bekungeke kwenzeke ukubonisa idatha kuphaneli. Lokhu kuhola kuvela kuzo zombili izinhlobo zama-odometer.
IGear: igiya liphethe ukwenza isilinganiso sisebenze. Igiya yilona elimaka inani lamashifu futhi yilokho okuchaza ibanga eliphelele elihanjiwe.
Insimbi eyinsimbi kanye kazibuthe: insimbi ingeza i-nucleus ethola amandla futhi iyikho okusiza ukuvumela ukuhamba kwamagiya ukuthi kuguqulwe kube amandla kagesi.
Kunezinhlobo ezahlukahlukene zama-odometer kuye ngemvelo nokusetshenziswa okuphakanyiswayo ukunikeza. Ngakolunye uhlangothi sine-odometer yemishini, ngakolunye uhlangothi, i-odometer yedijithali. Ngamunye wabo unokusebenza okuhlukile futhi uqukethe ezinye izici.
I-odometer yemishini nayo ibizwa ngokuthi yi-odometer yesondo.. Inesibopho sokubala isikhathi ngasinye lapho yenza ithuba eliphelele futhi ihamba ibanga elilingana nomjikelezo wayo. Ngakho-ke, uma ungabala inani lamathanga owenzayo, ungalazi ngqo ibanga eliphelele elihanjiwe. Le odometer yomshini ngokuyisisekelo iqukethe uchungechunge lwamagiya anezinombolo ezahlukahlukene emaphethelweni awo. Lezi zinombolo zinamathiselwe esondweni futhi zixhumana nalo ngochungechunge lwezintambo.
Amagiya e-odometer yokulungisa kufanele alinganiswe kahle ukuze ingahamba ngejubane elithile futhi iyahambisana nokujika kwesondo. Le yindlela ibanga elihanjiwe elingalinganiswa ngayo ngqo. Uma isihambile ibanga esilifunayo, ikhombisa ibanga elihanjiwe elizwakalisiwe kulowo phiko ebesililinganise ngaphambilini kuwo. Amayunithi asetshenziswa kakhulu amakhilomitha namamayela.
Kumele sazi ukuthi i-odometer yemishini inamazinyo ahlukile futhi ngalinye lawo lihamba ngejubane elihlukile. Iningi lalezi zinhlobo zama-odometer zibonakala ezimotweni ezineminyaka ethile yobudala. Lawa ma-odometer finyelela kumakhilomitha angama-99.999 futhi ngalowo mzuzu iyajika ibuyele ku-00 000. Imvamisa ifika nenye ikhawunta ekhombisa inani lezikhathi lapho ifinyelele khona phezulu.
Njengoba ama-odometer amaningi atholakala ezimotweni engasetshenziswa ngesandla, isetshenziswe njengenkohliso emhlabeni wokuthengiswa kwezimoto ezingamasekeni. Futhi ukuthi ungashintsha inombolo ekhonjiswe yi-odometer futhi uyinciphise. Lokhu kukuvumela ukuthi ufihle inani lamakhilomitha imoto ebihamba ngempela selokhu yakhiwa. Ngokunciphisa isibalo samakhilomitha ungahamba uzungeze futhi uthi imoto inokuhamba okuncane kunalokho okufunayo ngempela.
Kunolunye uhlobo lwesimanje lwe-odometer olurekhoda ibanga elihanjiwe kusetshenziswa i-chip chip. Ukufundwa kwamamayela kungabonwa kusibonisi sedijithali esinenani eliphelele lamamayela kugcinwa kumodyuli oyinhloko we-elekthronikhi. Ngenxa yokuthi bekucatshangwa ukuthi ngokufika kobuchwepheshe bolwazi kulolu hlobo lwensimbi yokulinganisa, kungenzeka ukuthi kuqedwe ukukhwabanisa kwezimoto ezingamasekeni, lokhu bekungenjalo. Futhi into ukuthi abantu bathole indlela yokukwazi ukuguqula amanani abhaliswe kwikhompyutha yemoto.
Konke lokhu kuholele ekukhwabaniseni ku-odometer yemoto esetshenzisiwe. Ziningi izinto ezithonya intengo yokuthengisa yemoto esezisebenzile. Noma kunjalo, Enye yezinto ezinethonya elikhulu inani lamakhilomitha owahambile. Akukhathalekile ukuthi imoto isibe neminyaka emingaki kusukela efektri yayo, kumele kubhekwe lonke ibanga elihanjiwe. Kukhona abantu asebenemoto iminyaka engaphezu kwemihlanu futhi abangayisebenzisi neze. Kulokhu, sizoba nemoto egugile kodwa engamamayela amancane. Lokhu kusisiza ukuthi sazi ukuthi izingxenye zakho azibukeki zigqokile njengoba zisetshenziswa.
Uma zonke izici zemoto ziyefana phakathi kwazo zombili, eyodwa enamakhilomitha amancane izobiza kakhulu. Lokhu kwenza ukukhohlisa kwe- izilinganiso ze-odometer kube wumkhuba osabalele. Lokhu kuhamba kususelwa ekuthatheni i-odometer, ukuhambisa uhlelo lwegiya kuze kuboniswe inani olifunayo, nokubuyisela i-odometer emotweni.
Uma ufuna imoto entsha futhi inamakhilomitha ayizinkulungwane ezingama-30 noma ngaphansi, ngokujwayelekile kusamele ube namathayi akho woqobo. Uma ubona imoto yakudala kodwa nge-mileage ephansi into yokuqala ukubheka ukugqokwa kwamafutha, ama-brake nama-clutch pedals. Ukuze ungawi kumkhonyovu, kungcono ukukhipha ama-invoice noma ubufakazi besibikezelo semoto yesondlo. Lawa mavawusha ajwayele ukukhombisa inani lamakhilomitha imoto ebinayo ngenkathi kudlula ukubuyekezwa.
Uma i-odometer ingumshini, izinombolo kufanele zihambisane kahle. Uma bezihlikihla kalula uma ushaya iphaneli, kungenzeka iphazanyisiwe. Ekugcineni, uma ungabaza ngempela ngesimo semoto, kungcono ukuya kwinsizakalo yezobuchwepheshe ezokwenza ukubuyekeza okuphelele kwenjini nayo yonke imishini yemoto.
Ngiyethemba ukuthi ngalolu lwazi ungafunda kabanzi nge-odometer ukuthi isebenza kanjani.
Indlela ephelele ye-athikili: Isimo Sezulu Senethiwekhi » Isimo sezulu » Odometer